Uchapupu - OUZHAN TRADE (SHANGHAI) CO., LTD
Sezvo Ouzhan yakatanga kutengeserana kwepasirese, takahwina kufarirwa nevatengi vazhinji:
Ini ndagutsikana nebasa raOzhan. Basa revatengi rinokurumidza uye Gaby akaita basa risinganzwisisike renhengo dzangu. Ini ndinotarisira chaizvo kushanda naOuzhan zvakare!
Kurumidza kutendeuka uye chigadzirwa chemhando chakagadzirwa kufungidzira. Ini handikwanise kukumbira zvinopfuura izvo. Ouzhan iguru shamwari!
Zvikamu zvakagadzirwa vachishandisa 3D mhando. Panguva yekukurukurwa kwechisungo, mainjiniya ainyatsoteerera uye akandibatsira kuwana zvisakarurama zvangu kuti ndikwanise kuzvigadzirisa. Yakagadzirwa yemhando yepamusoro. Iko kutakura kwakateedzerwa. Chikamu chega chega chaive chakazara Zvakapatsanurwa, zvakasiyana nevamwe mune yakawanda-fosi furo firimu. Ndiri kufara nemutengesi. Manager Chandler anga achibata, achipindura mibvunzo pazuva rimwe chetero. Ndinovimba kuenderera mberi nekubatana kwedu.
Iyi CNC shopu matombo! Anofara kwazvo nebasa uye izvozvi kuti ndine shamwari inondibatsira nemirairo yangu inoita kuti zvese zvive nyore. Ndiri kuisa mamwe maodha mukati izvozvi, kukurumidza sevhisi uye zvine hushamwari. Kumbira Rio iye akanaka kushanda naye!
Yakanaka sevhisi munzira yese. Kukurukurirana nekukurumidza kuburikidza neemail uyewhatsapp inokurukura zvese zvatinoda uye ruzivo uye masampuli akapihwa chaiko kumadhirowa edu emhando yepamusoro uye yekupedzisira Tinotarisira kushanda neOuzhan mune ramangwana rezvatinotenda kuti huchave hukama hwakareba kwenguva yakareba pane zvigadzirwa zvakawanda mupotifoliyo yedu.